कोरोना लागेर होम आइसोलेसनमा बस्दा के खाने ? के गर्ने ?: संक्रमितको अनुभव « Clickmandu
प्रकाशित मिति : ७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०९:०९
काठमाडौं । यतिबेला कोरोना संक्रमणको जोखिम सबैभन्दा उच्च छ । हरेक दिन ३ हजारदेखि ६ हजारसम्म संक्रमितहरु थप भइरहेका छन् । यसले कोरोना संक्रमण उच्च गतीमा फैलिरहेको देखाउँछ ।
कोरोना संक्रमित बढिरहँदा अस्पतालमा बेडको अभाव भइरहेको छ । आइसीयू, भेन्टिलेटर, सीसीयू, एचडीयू पाउन निकै गाह्रो छ । त्यसैले उपचार पाउन पनि गाह्रो हुने अवस्था आइसकेको छ । त्यसैले धेरै मानिसहरु होम आइसोलेसनमै बस्न बाध्य हुनु परिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा के गर्ने त ? एकजना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका व्यक्तिको सुझाव यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौं ।
महानचाड दशैं आइसकेको छ । त्यसपछि तिहार र छठ पर्व पनि आउँदैछन् । यस्तो समयमा मानिसहरुको खानपिनमा बढी जोड हुन्छ । यसले शरीरमा कस्तो असर पार्छ भन्ने ख्याल राख्नुपर्छ ।
सबै संक्रमितमा लक्षण देखिन्छ नै भन्ने छैन । केहीमा सामान्य लक्षण र केहीमा गम्भीर समस्या नै उत्पन्न हुने गरेको मैले भागेको छु । त्यसैले यस्तो अवस्थामा आफू सुरक्षित छु भन्ने तरिकाले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । र लक्षण नदेखि पनि स्वास्थ्यलाई उत्तिकै ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ ।
यदी तपाईं स्वस्थ हुनुहुन्छ र इम्युनिटी शक्ति राम्रो छ भने कोरोना १० देखि २० दिनभित्र निको भएको मेरो अनुभव छ । तर यदी शरीरमा अन्य कुनै रोग छ भने गाह्रो हुन सक्छ ।
म कोरोना संक्रमण मुक्त भएपछि धेरैले सोधेको प्रश्न यही हो । के खाने ?
(कोरोना संक्रमणमुक्त भएका व्यक्तीको अनुभवमा आधारित)